Uthando lukaNkulunkulu luzwa kanjani? - Mytika Speak
Ikhaya / Amalangabi Amabili Nothando Olungcwele / Uthando lukaNkulunkulu luzwa kanjani?
Uthando lukaNkulunkulu luzwa kanjani?
Uthando lwaphezulu lungazwela kakhulu.
Kwabaningi, icishe ibe yinhle kakhulu ebenza bazizwe bengafaneleki. Ngenxa yalokhu, bangazithola beyivimba noma beyifihla.
Abanye bakhetha ukumunca le mizwa bese bethola uthando oluqhamuka esikhungweni sokuqina ekujuleni kwenhliziyo yabo.
Love ayinaso isilinganiso, futhi uma sekwabelwane ngaso, ayinakubuyiselwa. Ukwesaba uthando olulahlekile akufanele kube khona, ngoba uthando alusoze lwalahleka ngokweqiniso.
Ngawo wonke umoya engiwuphefumulayo, ngiyanambitha ingqikithi yakho,
ngayo yonke imicabango enginayo, ngizwa ubukhona bakho.
Wena kwamandla ukufeza zonke izidingo zami,
ngokwenza induduzo yami ibe ukunaka kwakho okukhulu.
Kufanele ube yingqondo yomcabango wami,
Kumele ngikudale ngenhloso yami emsulwa.
Kufanele ngabe ungisungule ngengqondo yakho,
ukuze ube lolo thando lwaphezulu oyohlala uluthola.
Uma uhlala wedwa ungalilahli ithemba,
Sixhunywe ingunaphakade, ngiyohlala ngikhona.
Amathegiukuqonda uthando lwaphezulu Ugqozi ukukhula komuntu siqu izinkondlo ingokomoya Amalangabi Amabili
Uthando lwamawele omlilo lutholwa kanjani?
Ingabe i-True Self ingaba ne-negative?